K: Sein Lei Tin
ကျိူက်ထီးရိုး အပီး..စိမ်းလဲ့တင်လို့..(ပြောချင်လွန်းလို့..)စကားစပ်ထားပေမဲ့ ကြားဖြတ်အစီအစဉ်တွေတခုပီးတခုဝင်နေတာနဲ့..ခုမှပဲစိမ်းလိုက်ပါရစေတော့..ထွေထွေထူးထူးကြီးတော့လည်း ဟုတ်ပါဘူး..
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းလောက်ကပဲ..ကျိူက်ထီးရိုးမရောက်ခင်ပေါ့..ဈေးကွက်ဂျာနယ်ထင်တယ်..အွန်လိုင်းမှာဖတ်လိုက်ရတာ..စိမ်းလဲ့တင်နဲ့ သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်အမျိူးသမီးအကြောင်းပါ…နံမယ်တော့မမှတ်မိတော့..ဒါပေ..အဲဒီအမျိူးသမီးရဲ့..စွန့်ဦးလုပ်ကိုင်မူကို..အမှတ်ထင်ထင်..ချီးကျူးအားကျမိလိုက်တယ်..သူက..အဲဒီကျိူက်ထိုမြို့စပ်က..လယ်ကွင်းတပိုင်း..ကိုင်းတောတပိုင်းကြီးကို..တော်တော့်ကိုဈေးပေါပေါနဲ့..အစောပိုင်းက၀ယ်ထားလိုက်သတဲ့..လူတွေက..သူ့ကိုအစတော့..နားတောင်မလည်ကြဘူးတဲ့…နောက်တော့မှ..တဖြည်းဖြည်းနဲ့..ကျိူက်ထီးရိုးမှာရွှေလမ်းငွေလမ်းတွေပေါက်ပီး..နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအ၀င်အထွက်များလာချိန်နဲ့တိုက်ပီး..စိမ်းလဲ့တင်ဆိုတဲ့..တည်းခိုရိပ်သာကို..စနစ်တကျချဲ့ထွင်ခဲ့တာတဲ့..တိရိစ္ဆန်ရုံအသေးစားလေးနဲ့..ခေတ်မှီသပ်ရပ်တဲ့..ရေပေးစနစ်..စားသောက်ဆိုင်ဆိုတာတွေ..ဓါတ်ပုံနဲ့ဝေေ၀ဆာဆာမြင်ရတော့..သြော်..လုပ်တတ်လိုက်တာ..မြင်တတ်လိုက်တာ..လို့..မုဒိတာမပွားတပွားနဲ့..အားတွေလည်းကျပေါ့...
တကယ်ရောက်တော့..အချိန်က..နေ့လည် ၁ နာရီလောက်..ရာသီဥတုကတော့..ထုံးစံအတိုင်း..နေပူကျဲတောက်မို့..ပူစပ်ပူလောင်..ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော..လူမှာရော..ဖုန်နံ့ကတသင်းသင်း..နေ့လည်စာစားချိန်မို့ထင့်…ကားတွေတော်တော်များများရပ်ထားတာတွေ့တယ်..ခြံကြီးကတော့..တော်တော်ကျယ်မယ့်ပုံ…အမယ်..ကားတံခါးတွေဘာတွေလာဖွင့်ပေးလို့ပါလား..။ ၀င်ဝင်ချင်း..တိုင်ရင်းသား
အ၀တ်အထည်တွေ..မွန်ပြည်နယ်လက်ဆောင်တွေနဲ့ ခြံထွက်ဖြစ်ပုံရတဲ့ ကျွဲကော်သီးတွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်ခန်းလေး… အဲဒါကိုဖြတ်တော့မှ..စားသောက်ခန်းမကြီး..။
သူ့ဖွဲ့စည်းပုံက..အလယ်ပင်မစားသောက်ခန်းကထွက်တဲ့..စင်္ကြန်လမ်းရှည်ရဲ့တဖက်တချက်မှာ..သီးသန့်ဆောင်လေးတွေနဲ့..ရေစင်..ရေကူးကန်..သန့်စင်ခန်း..ပီးတော့စတိုဆောင်တို့..၀န်ထမ်းဆောင်တို့ဘာတို့ဖြစ်မယ်..အိမ်သာရေချိူးခန်းတွေကလည်းတော်တော့်ကိုကောင်းတာပဲ..။ သစ်ပင်တွေတော့..အများသား..။ ဒါပေမဲ့.စိုက်ကာစမို့..အပင်လေးတွေက..ခပ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ အရိပ်သိပ်မကောင်းလှသေး။
`Oh! she is so brave.. she is so brave..´ လို့..ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာအော်တော့..ဘေးစားပွဲတွေက..နိုင်ငံခြားသားတချိူ့..လက်ခုပ်လှမ်းတီးကြတယ်..ဓါတ်ပုံတွေလည်း..ထပ်ရိုက်ကြပြန်ရော..ပီးတော့မှ..အမျိူးသမီးက..သူ့အမျိူးသားဖြစ်ဟန်တူတဲ့လူကို..
`သမီးကိုခေါ်လိုက်တော့လေ..´ လို့..ဗမာလိုလှမ်းပြောတယ်..။ ပုံစံကြည့်ရတာ..ပြည်ပမှာနေတဲ့ ဗမာမိသားစုစတိုင်ပဲ..ဗမာပြည်မရောက်ဘူးတဲ့..ဗမာကလေးတွေကို..ဗမာပြည်လျှောက်လည်ပြတာနေမယ် ကလေးတွေကလည်း..တကယ့်ရဲရဲတင်းတင်း..သွက်သွက်လက်လက်ပုံစံလေးတွေ..။
ဟူး.. စားပွဲပြန်ရောက်မှ.. coke တဗူး အမြန် ဖွင့်ပီး မော့လိုက်ရတယ်..မှာထားတဲ့အစားအသောက်တွေတော့ရောက်မလာသေး..။ ဘေးဘီကိုလှမ်းအကြည့်..ဖြတ်ကနဲ..ဟိုဖက်စားပွဲက..အမျိူးသမီးနဲ့..မျက်လုံးချင်းဆုံသွားတယ်..။ ချက်ချင်းသိလိုက်တယ်..ဒါ..ဗမာမပဲဖြစ်မယ်..။ ဒါပေမဲ့..သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်အဆင်တန်ဆာတွေက..အပြတ်ကို..သားနားပီး..တော်တော့်ကို မိုက်တယ် ပြောရမယ်..ပီး..သူ့ဘေးက..နိုင်ငံခြားသားနဲ့..ပြင်သစ်လိုလိုဘာလိုလိုပြောနေတယ်..။
ကဲ..ကဲ.. ဒီဖက် ပြန်လှည့်ရင်း.. ကိုယ်တို့ စားပွဲ ကို တာဝန်ယူ ပေးနေတဲ့ ကောင်လေးကို..ခုမှပဲ ပြုံးပြနှူတ်ဆက်မိတယ်။ တခြားစားပွဲတိုင်းမှာလည်း..ကောင်လေးတယောက်စီ..ရှိနေကြတယ်..။ သူတို့တွေအကုန်လုံး..ရှိရင်..၁၅ နှစ် နဲ့ ၁၈နှစ်ကြားအရွယ်လေးတွေချည်းပဲ။ လည်ကတုံးရှပ်လက်တိုအဖြူရောင်ဆင်တူနဲ့..တချိူ့လည်းမွန်ပုဆိုး..တချိူ့လည်းကရင်ပုဆိုးလေးတွေ..သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ထားကြတယ်...။
` သေချာတော့မသိဘူးခင်ဗျ..တညကို ၃သောင်းကနေ..၅ သောင်းအထိရှိမယ်ထင်တယ်..´
ဘိုးတော်စကားမဆုံးခင်..ကောင်လေးက..စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့..` ဟို..မီးစက်ပိတ်လိုက်လို့ပါ..အကို´ ဆိုပီး..ယပ်တောင်တွေသာ..အတင်းလာခပ်ပေးနေတော့တယ်..
` ဘိုးတော်ရေ..ငါတို့ကတော့..ဗမာတွေမို့..ဒီဇယ်အကုန်ခံပီး..မီးစက်မမောင်းပေးတော့ပါလားဟေ့..´ကောင်လေးက..အားနာစွာနဲ့..` ဖွင့်တာကြာလို့..ခဏရပ်တာပါခင်ဗျ..´ လို့ဖာဖာထေးထေး ပြောရှာတယ်။ ဒီကောင်လေးပုံစံကတော့..တကယ့်မွန်မွန်ရည်ရည်လေး..
အင်း..ကိုယ်တွေတင်..migration လုပ်သလားအောက်မေ့တာ..သူတို့လည်း.. migration ပဲ..Internal migration ပေါ့လေ..
ကေ ပိုင်လိုက်တာ ရေးပုံက
အမတော့ အဆုံးသတ်မှာ ရယ်လိုက်ရတာ ။
“ ... ” တွေကြောင့် စာစု (word) တွေက အားလုံး တဆက်တည်းလို ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ကြောင်းကို ဆင်းမလာတော့ဘူး (wrap မလုပ်ဘူး)။ Feed Reader မှာ ဆိုရင် စာကြောင်း အပြတ်တွေပဲ မြင်ရတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ခုလောက် အကြံပေးချင်ပါတယ်။ စာစု နဲ့ “...” ကြားမှာ space လေး တခုလောက် ထည့်ပြီး ရေးကြည့်ပါလား။ ဥပမာ -
ကျိူက်ထီးရိုးအပီး .. စိမ်းလဲ့တင်လို့ ... ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်လည်း စိမ်းလဲ့တင်ဆိုင်ရဲ့ နေရာနဲ့ အဆင်အပြင်လေး သဘောကျတယ်။ အခုလို ဖတ်ရတော့ လွမ်းစရာ တစ်ခုတိုးတာပေါ့။
ကျနော်ဖတ်ရတာ ညဘက်အစွန်က စာကြောင်းတိုင်း ပြတ်နေတယ်။
တင်ပြပုံကောင်းပါပေတယ်…အဆုံးက ဖြစ်ရပ်မှန် မြန်မာအမျိုးသမီး စစရှင် များ အသင်း ကဗိုလ်မှုးကြီး စိမ်းလဲတင်နဲ့ အဆုံးသတ်ထားပုံကြောင့် equality and fair business right မရှိတဲ့ မြန် မာ့ ရှုခင်းမြန်မာ မြင်ကွင်းလေးက ပီပီပြင်ပြင်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရှိလှပါပေတယ်…
စာတွေဖတ်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေပါ။ စာကို MS Word မှာ ရိုက်၊ justify လုပ်၊ copy လုပ်ပြီးမှ blogger မှာ ပို့စ် လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ အင်တာနက် ဘရော့ဘမ်းရရင်လည်း အော်လိုက်အုံးနော်။
ဘာရော..ကောင်းကောင်းပေါ်သား။ Browser နဲ့များဆိုင်မလား။
Oh! My! Whatalife!
ဟားဟားဟားလို့ပဲ တအားရယ်သွားတော့တယ် အမရယ်
လာဖတ်သွားတယ်ကေရေ.... အဲဒီမြွေသုံးကောင်ကို ချက်စားပစ်လိုက်ကြပြီထင်တယ်.... :)
အဲသည်ဟာ မဖတ်ဘူးသေးဘူး ကျေးဇူးကေ. အဟိ
အမှန်တော့ အဲဒီကအိမ်သာတွေက သိပ်မသန့်ဘူး။ အစားအသောက်ကလဲ အရသာတော်ရုံပါပဲ။ အဲဒီလမ်းကို အမြဲသွားနေတော့ အဲဆိုင်ကိုလဲ (ခဏ)2 ရောက်တယ်။ ကလေးတွေကတော့ ပျော်တာပေါ့။ ဇူးလဲ ရှိတယ်ဆိုတော့။ တခါတော့ မျောက်တွေထားတဲ့ လှောင်အိမ်နားမှာ သမီးလေးကိုသွားပြတာ အထဲက မျောက်ကြီးက လက်ထုတ်ပြီး ကလေးခေါင်းကို လှမ်းဆွဲတာ။ တော်သေးတာပေါ့ မျက်နှာတွေ မျက်လုံးတွေကို မခြစ်မိသွားတာ။ ကျွန်မမှာတော့ ဒေါသတွေထွက်လိုက်ရတာ။ လှောင်အိမ်ကို သူတို့လုပ်ထားပုံ စနစ်မကျလို့သာ အဲဒီမျောက်က လက်ထုတ်ပြီးလှမ်းဆွဲနိုင်တာပေါ့။ ခြုံပြောရရင် စိမ်းလဲ့တင်ကို မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန် မော်လမြိုင်လမ်းမှာက စားသောက်ဆိုင် ကောင်းကောင်းနဲ့သန့်သန့် မရှိတော့လဲ သူ့ကိုပဲ သုံးနေရတာ။